Date My Pet » Dating – Uri vangavhiringidza Yourself?
"Ndinovenga kufambidzana" ndiyo mhinduro zvandinonzwa kubva pavakadzi vandinotengesera kazhinji. Izvi kunaka atinoitwa kudanana chimwe huru zvikonzero kuti vakadzi vasina anogona kugara 'chavasina' uye kuroorwa kwenguva refu kudai. Vazhinji vakadzi ndinouya pakukurukura coaching tsika yangu nzira kudanana naye zvachose zvakaipa pfungwa yakatarwa, zvichireva kuti nzira Vanoswedera kufambidzana chaizvoizvo sabotages mikana yavo rokusanganira hwavo upenyu naye.
Asi mafungiro iyi zvachose zvinonzwisisika. Tave tose ikoko, 'Kumanikidza' pachedu kuchikutadzisa mutambo, kusaina kusvika paIndaneti kufambidzana magazines, trawling kuburikidza nemashoko izvo dzimwe nguva kuti ganda kambaira, Kakawanda akaroora varume nezvimwe vaisafarirwa, uye pakupedzisira nokupa mumwe mukana nokuti anotaridzika zvakanaka. Ndakasarudza kuonana, nokungotaura negotsi uye mberi, zvichida kunyange kutanga kuwana kudzima kufara - iye sokuti zvakanaka, iye zvikuru akanaka achitarisa mumifananidzo uye pane chaicho kubatana. Saka iwe kuronga musangano. Muri huta, Unopedza mijenya nguva uye simba kugadzirira, here kana uri kuita chikanganiso, asi iwe vanoedza, kudhonza pamusoro bhachi rako, kuenda chando uye vashanyire kwose (maawa kazhinji mashomanana kunyange) kusangana zuva rako. Uri kunzwa kufara zvino, pashure zvose aigona kuva 'munhu'.
Ipapo iwe kumuona! mwoyo yenyu anodzika nokuti anotarisa HAPANA akafanana mifananidzo yake, chokwadi ndiye zvakawanda 'Shrek' pane 'Becks'. Iye masendimita maviri mapfupi pane akati akanga, uye mifananidzo ivavo vakanga pachena akatorwa akawanda apfuura kutonga nezvinooneka imwe uremu uye akasiyana kushaya bvudzi! Zvisinei iwe zvakaneta vakatsidza 'wekuedza' kumupa mukana, Ndinoreva imi akauya yose nzira pano! Pane pamusoro zvakawanda remagineti sezvo waizonzwa ane soggy makabheji imi pakarepo kutanga kuronga Tiza uye. Asi iwe haudi kuva unhu saka iwe ugere kuburikidza zvinorwadza yeawa netsa, pfava kukurukura pamusoro hapana zvikuru, uye nguva yose yauri chete kuvava kutiza. Kubatana kuti paiva paIndaneti iri po- kuonekwa uye imi muri pachena vaviri kunzwa dzamira. Paunenge wabva kuchinaya here kuti nei iwe aipedza nguva, mari uye nesimba kuuya pamusoro perimwe zuva uye imi nekupi musha manzwiro mwoyo uye kunyange zvakawanda zvakasimba midzi vachidavira kuti pane chete havasi chero kwaye varume ikoko newe! Hazvishamisi vakadzi kuti zvokudya kukwira.
Dating anogona kushatirisa uye zviri nyore kuwana demotivated. Inogona kunzwa kubudisa uye kunyange mwoyo dzinoshungurudza kuenda tambo yemichindwe nevanhu kuti unzwe hapana chimvari pamwe, uye vane tariro yako Rokusangana nomumwe chipitipiti zvakare uye zvakare. Pane njodzi kurukutika kana uchiita yakawanda kudanana uye vamwe vakadzi vanogona kuva yokutsoropodza. chaizvo uye kunyange jaded. Izvi Hazvizobatsiri ako ezvinhu ose nokuti kana ari nzira iyi, mukadzi chete anogona unomusuwa Mr Right nyore zvachose paanozouya vanouyawo.
Ko munoziva kuti vakadzi vakawanda havana chaizvoizvo chinoshamisira munhu zvavanozozvidemba kuenda kuroora pavanotanga kundosangana naye? fadza! Imwe ongororo ichangobva kuitwa mu The Daily News inofungidzira kuti kumativi 22% vevakaroorana kusangana kuburikidza basa. Izvi haisi tsaona – nekuti kukwezvana anobvumirwa kuvaka sezvingatarisirwa, kupfuuridza nguva. Uye kazhinji kacho ndiye kazhinji munhu kuti iwe vaisazombofa kwakapa mukana kuti kudai asangana naye paIndaneti, chinhu kuyeuka sezvo uri kusefa kuburikidza machisi dzenyu.
Saka zvokuita ipapo kushandura ichi akaipa kunzwa nezvokudanana?
Zvakanaka chaizvoizvo kuchinja nyore sezvazviri ndiye zvose zvinodiwa zvokuchinja yose ruzivo zvokufambidzana woga kuti unogona chaizvoizvo kutanga yokuzomboiona, uye unogona call murume wako zvikuru nokukurumidza. Kana vakadzi vanogona kutanga kuona kudanana sezvo 'mafaro tsika'Ivo vachava zvakawanda kubudirira, uye ivo vachava muitiro zvizhinji. Saka chii chaizvo anoita 'mafaro tsika'anorevei?
Ava TOP MAZANO achakuudzai sei kushandisa 'mafaro tsika ' kusvika yekubudirira.
1. Rega wenyaya.
Usafunga nezvake somunhu zvinogona upenyu naye, pachinzvimbo chete kuvapo panguva iyi itsva munhu uyu uye kuziva nezvake. Rinongova zuva – hapana vimbiso ukama kana kuroorana - chiri kofi, kana kufamba kana chero zvauri kuita pamwe chete. Kubatsirwa pano zviviri, Chekutanga zvichakutorera ose muedzo kure zvokuti unogona zvose faranuka, uye iye achava kunzwa kuti. Most varume vakanaka huta musi wokutanga uye regai pachavo kupa panguva yavo yakanakisisa, Zvisinei izvi zvichabatsira asununguke. Chepiri usvike kudzidzira kuva kumativi varume vanoda iwe, zvichireva kuti kwenyu nokuzviremekedza anokwira, uye kana 'murume wako' anoratidza iwe wagadzirira kwaari nokuti vava 'inongoitika'.
2. Ramba kutanga mazuva pfupi chaizvo.
Havabvumi kudya kwamanheru misi wokutanga misi shoma nokuti yakarebesa kupedza nemunhu hauzivi. Kweawa nguva imwe neimwe ndizvo zvizhinji kupedza nomudzimai yemisangano vokutanga. Pfupi uye impactful ndizvo zvatiri kuenda nokuda pano. Izvi zvichakubatsira kudzivisa kurukutika zvakare paunenge kufambidzana vanhu vanoverengeka kamwechete pakutanga.
3. Regai kukurukura paIndaneti nevanhu vanogara kure kwazvo newe.
Izvi anoponesa yakawanda simba uye nokurwadziwa. Itai mutemo kufambidzana vanhu chete ndivo dzomunharaunda kwamuri (mukati yeawa navi kure misoro). Most Nzvimbo paIndaneti vane rutivi yaunogona kunatsiridza yenyu kutsvaka mibairo chete inosanganisira vanhu mukati imwe daro. Yeuka iwe ukarega kuziva munhu kusvikira ukasangana navo munhu, saka hapana kazhinji akwirwe paIndaneti kuti handiye ikoko kana ukasangana zviso zvakatarisana. Neniwo dzichitsigira murume vaifamba kumukadzi kuti mazuva.
4. Sununguka uye afarire musi. Nakidzwa!
chenjera – izvi hazvirevi kunwa truckload doro! Kunyange ndinoita kunzwisisa nei vanhu seboka chinonwiwa musi wokutanga zviri nani varegedze zvachose kana kunamatira chete pazuva rokutanga musi kuitira kuti unogona here Tambira takananga uye ona kuti unonzwa musi uyu, pasina doro kupa zvinhu hwakanaka tint. Panzvimbo ona kana uchikwanisa kuwana chinhu chinonakidza nezvake, wose ane chinhu!
5. Mupei mukana.
Izvi zvinoreva kuti awana zuva rechipiri kana akakumbira mumwe, chero kuti unonzwa wakachengeteka naye. Iwe kumupa mukana uyu kunyangwe haufaniri waunonzwa kwaari. Yes HERE! Ichi chinhu chinokosha muitiro, kunyanya vakadzi vane muenzaniso ukama dzakaipa uye kunonga nevarume vasiri zvakanaka.
6. Ngaaratidze kutungamirira
Ichi chikamu zvose zvangu maonero vakadzi vari kutsvaka ukama hunofadza. Saka zvinoreva achava mumwe kukumbira musi wechipiri, kana pane kuva munhu. Neniwo vanotsigira kuti waanoripira nekuti ichi chinobatsira ikadzikapo ukama simba nemazvo, kunyange ini kuziva izvi pamakakatanwa kune vamwe vanhu. Ladies Unoda serwainakidza zvakanaka?
7. Dzidzira kuvimbika zvakakwana sei uchinzwa.
Paunenge uri misi nevarume ava muri vakatendeka uye imi munoti manzwiro aunoita, kunyange kana izvi hainyatsonzwisisika kuita kudaro pakutanga. Saka kana uchinzwa kufinhikana / huta / akatendeuka kure / unogona kutaura kufarira / kufara kuti. Kwete bitchy nzira, munzvimbo yakavhurika uye yokutendeseka. Izvi terrifies vamwe vakadzi, uye uchava kushamiswa sei varume vakawanda vachange kuutora stride kwavo uye kukoshesa kuva vakatendeseka. Plus izvozvo kunozarura nzira chaiyo, akatendeseka kutaurirana, uye anomupa inofambiswa inova yendarama mukana kwaari kuchinja uye tawedzera mutambo wake kwamuri (kana anofunga imi munokosha here – izvo uri).
8. kungwaririra, vanofarira uye pfava.
Unogona kufunga ndiye wako akakodzera murume asi iye akauya kwauri uye ari kukubata kuti musi, uye kuti akakodzera kuonga.
Kudanana uku hakumbobatsiri chete iwe kunakidzwa naro zvikuru, asi kuchakubatsirawo kuvaka vako 'ukama tsandanyama' nokuti uchawana kudzidzira kuva pachako (ane simba, zvechikadzi mukadzi) kumativi varume chaivo. Uye paunenge uchiita izvi murume wako zvose acharatidza kumusoro kana iwe kupfuura kutarisira izvozvo!
Tevera izvi pamusoro mazano kufambidzana nomumwe munhu uye toona kwako kufambidzana ruzivo zvachose kunoshandura.